Maxaa ka jira in Sheekh Shariif uu ka tanaasulay musharraxnimadiisa? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Maxaa ka jira in Sheekh Shariif uu ka tanaasulay musharraxnimadiisa?
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Sheekh Shariif Axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga ayaa ka hadlay warar dhowaan lagu baahiyey baraha bulshada ee Internet-ka, kuwaas oo sheegayey inuu ka haray tartanka xilka madaxweynaha, isla-markaana uu u tanaasulay musharrax kale.
Shariif ayaa wararkaasi waxba ka jiraan ku tilmaamay, wuxuuna shaaca ka qaaday inuu aaminsan-yahay dimuqraadiyadda iyo in lagalo tartan xor ah.
Musharrax madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale xusay inuu dadaal soo geliyey dalka, uuna ka qeyb-galayo doorashada soo socota ee madaxweynaha.
“Waxaan had iyo goor aaminsannahay dimuqraadiyadda iyo in lagalo tartan xor ah, ku salaysan aragti siyaasadeed iyo isbahaysi, taasoo aan waqti soo galinnay welina aan u taagannahay,” ayuu qoraalkiisa ku yihi madaxweyne Sheekh Shariof Sheekh Axmed.
Sidoo kale wuxuu meesha ka saaray inuu jiro heshiis ay waxgaradka beelaha Mudullood ku gaareen inay isku tanaasulaan musharraxiinta qaar ee u tartamaya xilka madaxweynaha.
“Sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan waxba kajirin wararka ku saabsan shir ay yeesheen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha mudullood oo lagu gaaray heshiis isku tanaasul ah oo la dhex dhigay murashaxiinta qaar,” ayuu markale yiri Sheekh Shariiif.
Dhawaqa kasoo yeeray Sheekh Shariif ayaa meesha ka saaraya hadal-heynta qabsatay baraha bulshada ee ku aadaneyd in musharraxiinta Mudullood ay isku tanaasuleen.
Si kastaba hadalkan wuxuu ku soo aadayaa, xilli xasaasi ah, isla-markaana haatan lagu guda jiro xilligii doorashada, iyada oo la bilaabay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka.